Falanqaynta Qiime-Sinnaanta: Iskaashiga Istaraatiijiyadda Waxtarka Wax-qabadka
Daraasadani waxay baari doontaa caqabadaha iyo casharradii laga bartay 10-ka bilood ee horumarinta Istaraatiijiyadda Waxqabadka Carbon, oo ah wada-shaqayn dhex marta Mellon Capital Management iyo The McKnight Foundation, oo bixiya maalgashadayaasha carbon-moodbeedka si ay u maalgashadaan shirkadaha ay hawshoodu hoos u dhigi karto qiiqa kaarboon .
Dhamaadkii October 2014, Gabriela "Gabby" Franco Parcella, guddoomiyaha, madaxweynaha Mellon Capital Management1 (MCM), iyo Kate Wolford, oo ah madaxweynaha machadka McKnight, ayaa ku dhawaaqay hannaan wadajir ah oo loo yaqaan "Strategic Efficiency Strategy (CES)". CES waxay ka dhigan tahay alaabo muhiim ah oo bixiya mashaariicda xalka hoose ee kaarboon carbonatka si ay u maalgashadaan isla marka ay sidoo kale fuliyaan masuuliyadooda kalsoonida.
Daraasada Case CES waxay baartaa horumarka Mellon Capital ee CES waxayna sahminaysaa caqabadaha iyo casharrada laga barto inta lagu gudajiro geedi socodka - fikradaha kale ee soo jiidashada ah ayaa laga yaabaa inay doonayaan inay tixgeliyaan marka ay abuurayaan badeecooyin cusub oo maaliyadeed ah oo isku dheelitiraya dib u soo celinta dhaqaalaha iyo natiijooyinka bulshada iyada oo lagu darayo cabbir gaar ah xoogga saar.
Daraasadu waxay eegaysaa sameynta istaraatiijiyadda CES iyada oo loo marayo fikradda Hoggaanka Qabsashada (DL). DL waa nidaam u ah hoggaamiyeyaasha si ay u isticmaalaan wax ka qabashada dhibaatooyinka iyada oo aan la helin xalal sahlan ama la isku raacsan yahay.
Fiiri Website-kaDownload Warbixinta